किन लाग्दैछ विवेकको बट्टामा बिर्को ? - Deshko News Deshko News किन लाग्दैछ विवेकको बट्टामा बिर्को ? - Deshko News
यदि परलोक छ भने देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने लडाइँमा आफूलाई विसर्जन गरेका नेताहरुको अवस्था मादल सुन्ने पाठाको जस्तै हुँदो हो । बीपी, पुष्पलाल, गणेशमानसिंह, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता युगपुरुषहरु स्वर्गको आँखीझ्यालबाट यहाँको चर्तिकला त्यही पाठा झैं सुन्दा हुन् ।
अनि विरक्तिएर आर्तनादको दुन्दुभि बजाउँदा हुन् । आफ्नो विगत सम्झिदा उनीहरुलाई नै कहालीलाग्दो हो । कर्मको श्रद्धा नभई जन्मजयन्तीमा आफूलाई मोडल बनाएर रिमिक्स शैलीमा कथित कार्यकर्ताको भीड देख्दा वीपीको आत्मा कति भड्कँदो हो ।
देशको अगाध माया हुँदाहुँदै शक्तिको माथापच्चीका कारण त्यसबेला मिल्न नसकेकोमा राजा महेन्द्र र बीपी पश्चातापको आँसु बगाउँदा हुन् । हुन पनि उनीहरुले शासन गरेको त्यो युग धेरै गुनासा बीच पनि स्वर्णयुग थियो । नेपाल र नेपालीको इज्जत थियो ।
राष्ट्रहितका लागि राजा जनता समान थिए । देशका प्रमुख चार शहीद जन्माउने पुरानो दल प्रजापरिषद्का नेता स्वयं राजा त्रिभुवन रहेको इतिहास छ ।
फेसबुके नेता, फेसबुके प्रशासक, फेसबुके जनताको भाइरसले देशका तमाम अंगहरु निष्कृय छन् । नूनको सोझो चिताउनेभन्दा फेसबुकको लाइकमा रमाउने उन्मादले सवैलाई उत्ताउलो बनाउँदै लगेको छ ।
बाउ मरेको समाचार अपडेट नगरी घाटको कर्म गौण ठान्ने अवतारी सन्तान हजारौं लाखौं संख्यामा जन्मन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका, लेखिएका वाक्य हेर्दा यो देशमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको वौद्धिकता, बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन, गणेशमानसिंहका राजनीतिक निष्ठा रंगहीन प्रमाणित हुन्छन् ।
मानौं अष्टबक्रजस्तै जन्मिनुअघि नै सबलाई सवै कुराको ज्ञान छ । राष्ट्रियताको चकमके झिल्को यसरी प्रकट हुन्छ कि त्यो बेगले मार्क जुकरबर्गको कमाइ खाने फेसबुके भाँडोलाई नै केही समयमा जलाएर खाग बनाइदिनेछ । विवेकको बट्टामा विर्को लगाएर दास मानसिकता असरल्ल छरिएका छन् ।
शिकार गर्ने ताकत सकिएपछि झिंगेदाउमा लागेको बाघ झैं अर्ती र बुद्धिका भकारी भएर बाँचेका नेता र प्रशासकका कुण्ठाले फेसबुकमा राम्रै जागिर पाएको छ । वास्तुशास्त्रीले दिएको सल्लाह हुबहु मानेर कुर्सी र टेबलको दिशा फेरेको बाहेक अरु काम नगरेका यस्ता भूतपूर्वहरुले नमागिएको सल्लाह दिएर अभूतपूर्व हुने जाँगर देखाउनु घोडाअघि बग्गीको प्रवेशजस्तै हो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नामक झाँकीको उत्ताउलोपनले ‘सबै नेपाली पञ्च, सवै पञ्च नेपाली’को पञ्चायती नारा उछिनेको भान पर्छ । आफ्नो सामथ्र्य आंकलन गर्न नसक्ने कच्चा नेतृत्वको तस्वीर जताततै छताछुल्ल देखिँदैछ । सरकारका उल्लेखनीय काम हाकिमको कुर्सीबाट तौलिया झिकिएको तर्पm साँघुरिदैछ ।
सरकार क्रमशः कर्पोरेट हाउसमा अनुवाद हुँदै गएको छ । ओपन हार्ट सर्जरी गर्नुपर्ने सरकारी संयन्त्रतर्पm कसैको ध्यान छैन, बरु त्यही चाकरी, चाप्लुसीको न्यानो दुई तिहाईको नेतृत्वलाई समेत प्यारो भएको छ । ठेकेदार, बिचौलिया र तिनीहरुको आडमा सरकारको सिउँदो पहिरेको दम्भ गर्ने तर स्वामित्व कहिल्यै नलिने कर्मचारी कजाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति कसैमा देखिएन ।
दलहरुको संरक्षणमा खुलेका सबै खालका टे«ड युनियन भंग नगरेसम्म समृद्धिको बाटो कुहिराको काग बन्ने निश्चित छ । सरकारका फ्रन्ट डेस्कका कुनै निकायसंग जनताको विश्वास छैन ।
जसको परिणाम एउटा पत्रकारले चलाएको कार्यक्रममा उजुरीको ताँती लाग्नु पछाडिको रहस्य यही हो । एउटा पुलिसको सिपाही कर्तव्यच्यूत हुनु भनेको नैतिक रुपमा सरकार असफल हुनु हो । एउटा मन्त्री नालायक प्रमाणित भयो भने सरकारको सारथीले उम्किने मौका पाउँदैन ।
सरकारका प्राथमिकता के हुन ? बाँडीचुँडी खान चोसो मिल्ने मन्त्रालयहरु विकासको एजेण्डामा वर्षौंदेखि किन द्वन्द्वमा उत्रन्छन ? प्रधानमन्त्रीदेखि वडासदस्यसम्म कर्तव्यको नभई अधिकारको चिन्तामा मोलमोलाई गरेर बसेका छन् । मेलम्चीको कथा खरायो र कछुवा बनिसक्दा पनि खानेपानी मन्त्रीको रोडम्याप हिमालको पानी खाडी लगेर बेच्ने उडन्ते योजना छताछुल्ल हुँदा प्रधानमन्त्रीले लगाम लगाउनु पर्छ कि पर्दैन ?
रेमिट्यान्स हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने सरकारले हस्तक्षेप गरेर मेनपावरलाई नालायक मानिसको हातबाट आफ्नो नियन्त्रणमा लिई रातारात तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न के ले रोक्यो ? नरेन्द्र मोदीको सवारी मन्त्री भएर देवी देवालयका मन्दिर पुग्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले आफू त्यो ठाउँमा गएर आन्तरिक, वाह्य पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न कुन दर्शन बाधक बन्यो ?
मानसरोवर जाने आफ्ना जनतालाई एक लाख भारतीय रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय गर्ने उत्तर प्रदेश सरकारलाई पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथका लागि पचीस हजार छुट्याउन आग्रह गर्दा नेपाली कुटनीतिको कद कहाँ पुड्को हुन्थ्यो ? अब स्टीलको गिलासमा जाँड बोकेर पानी खाएको नाटक गर्ने पाखण्डी जमाना रहेन ।
नेताको हुकुमका भरमा अब पुस, माघको जाडोमा आइसक्रिम बेच्न जाने कुनै मुर्ख कार्यकर्ता छैनन् । शोषक, सामन्तको घिउ नलाग्ने भाषण गरेर फिँज काढ्ने र पर्रर्र ताली खाने जमाना एकादेशका कथा भए । सत्तारुढ दलको गतिविधि हेर्दा लाग्छ– मानौं सृष्टिको पहिलो र अन्तिम सिर्जना भनेकै कम्युनिष्ट हो । माओवादीको रुकुम, रोल्पा, प्यूठान भने भैंm मालेको राजनीतिक भाव भूमि भनेको झापा हो ।
कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा पहुँच जमाउँदै आएका त्यस्ता हस्तीहरुको दर्जनौं परिवार छ, जसले आपूmले बालीनाली लगाएको खेतीबारीमा जंगेपिलर सरेको वर्षौं भइसक्यो ।
आफ्नो पदचापले खेलेका भूमि अब चाहेर पनि चन्द्र, सूर्यको अधिनमा छैन् । लालपूर्जामा भएकाहरुको बाली पारी तिरै थन्किने भएपछि हलोको फाली नपरेको दशकौं भइसक्यो ।
राजमार्गमा झाँकी लिएर हिँड्ने नेताहरुले मुलुकको प्रमुख समस्या आफूभित्र रहेको कहिल्यै खोलेनन । राष्ट्रवाद र स्वाधीनताको थालनी आफ्नै बलेसीबाट शुरु गर्नुपर्ने होइन र ? बरु अरुलाई पुड्को देखाउन आफूले नक्कली राष्ट्रवादको सहारा लिएर हिँडे । केपी ओलीलाई लाग्छ– मेची महाकाली बाटोमा हिँड्ने लर्को सबै आफ्ना कार्यकर्ता हुन । अहँ होइन, त्यहाँ अधिकांश लोभीपापीको झुण्ड छ । राजनीतिका नाममा तपाईंहरुले देशमा जनताको बीउ नै मास्नु भएको छ ।
वकिल, डाक्टर, न्यायाधीश, पत्रकार, कर्मचारी, पुलिस झण्डे भएको मुलुकमा अरु त के नै बाँकी छ र ? देशैभरि कम्युनिष्ट वर्चस्व भयो रे ! खोइ के भयो ? संसदमा झिनो उपस्थिति रहेको काँग्रेसले राखेका माग घुमिफिरी संसदबाट पारित भएका छन् । सरकार आपूmले गरेका निर्णयमा चौबीस घण्टा टिक्दैन ।
सरकारका निर्णय हेर्दा लाग्छ– प्रतिपक्षले सरकारको फलमासु रोजीरोजी खाएको छ । भोलि उसैलाई ह्याकुलो टक्र्याउन तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ । पैसाले अघाएका कुन पार्टीका कुन नेता भेटिएला ? ४० प्रतिशत पद विक्रीमा तपाईंहरुले राख्नुभएकै छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेका सीडीओहरु समाज गठन गरेर राजनीति गर्छन् ।
उनीहरुलाई आफ्नो हैन, ओली, दाहाल र देउवाको हेडक्वार्टरको चिन्ता हुन्छ । न्यायाधीशहरु संघ बनाएर पानी आपैंm प्यासले तड्पिएको छनक दिन्छन् । न्यायालयमा पन्पिएको राजनीतिक बीउ अब अलि वर्षपछि यसरी झाँगिने छ कि त्यतिबेला कांग्रेस, एमाले र माओवादीको छुट्टाछुट्टै बेन्च हुनेछ । एउटाले गरेको फैसला अर्कोलाई चित्त बुझ्ने छैन् । त्यसपछि पूर्ण इजलासको माग हुनेछ ।
त्यसमा पनि सत्ता सन्तुलनको आधारमा न्यायाधीशको राय बाझिनेछ । त्यसबेला स्वतन्त्र न्यायालयको विरुप दृश्य कस्तो देखिएला, संझदा पनि काँडा उम्रन्छ । त्यसैले त अब राष्ट्रियताको जग मजबुत पार्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र प्रेस जगतले नभएर सिमेन्ट र डन्डीले लिएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा मुलुकको कार्यकारी पद जिम्मेवारी नभएर चटकेको आसन बन्दै गयो । मूढ बुद्धि भएकाहरु पनि त्यहाँ पुगेपछि परमार्थी पुरुष बन्ने अभिनयमा मस्तराम भए । सिक्नु नपर्ने, सल्लाह लिनुनपर्ने तर आपूmले बोलेका हरेक वाक्य ब्रम्हवाक्य भन्ने भ्रम पाल्नुपर्ने अनौठो मनोविज्ञानबाट उनीहरु हौसिंदै गए ।
प्रधानमन्त्रीलाई अनुकूल हुने एजेण्डा लिएर जाने हुक्के, बैठकेहरुको भीडले ठूला मानिसहरु छोपिँदै गए । राम्रो लाउने र मिठो खानेमा सीमित ती एजेण्डाले व्यक्तिको अनुहार त फेरियो तर देश गर्तमा जाकिने प्रस्थान विन्दु कोरियो । जमिनविनाको त्यो अभिनय पदबाट खुस्केका भोलिबाट सियोले घोचिएपछि बेलुनको हावामा अनुवाद भयो । सिंहदरबार देशको त्यस्तो खतरनाक ७८ औं जिल्ला हो, त्यहाँ पुगेपछि अपवाद बाहेक सवै दाँत फुक्लेको बाघ भएर फर्किएका छन् ।
पुलिस र सेनामा क्रान्तिकारी संघ खुल्नुबाहेक त्यहाँ भित्रका रमिता झन्झन् छताछुल्ल भएका छन् । त्यहाँका हाकिमहरुको मुख्यालय आफ्नो कार्यालय नभएर नेताको हेडक्वार्टर सरेको वर्षौं भइसक्यो । फौजीमा सरुवा बढुवा हुन ब्रिफकेस हटकेक बनेका सन्दर्भ भलीभाँती बाहिर आएकै हुन ।
देशका हरेक निर्णय दारी र सारीका प्रभावमा पर्ने क्रम तीब्र छ । जर्नेलहरुले लेखेको आत्मबृत्तान्त आत्मरति बन्दा सिनियर गड र जुनियर डगको अवस्था राम्रैसंग उदाङ्गिएको छ । सामाजिक मनोविज्ञान हेर्दा लाग्छ– समयले बुढ्यौलीपनलाई विस्थापित गराइदिएको छ । रामनाम जप्नेहरु हराउँदै छन् । बरु रिटायर्डहरु ‘नेभर टायर्ड’ भन्दै राज्यकै सुविधामा रमाउन कस्सिदैछन् । रिटायर्ड हुनुअघि नै पदको मेलोमेसो मिलाएर निस्कनेहरुको भीड पनि उत्तिक्कै हेर्नलायक देखिन्छ । आपूmबाहेक संसारलाई उल्लू देख्नेहरुको रोचक भीडन्त घरघर र टोलटोलका भट्टीमा देख्न पाइन्छ ।
गौतम बुद्ध मूर्ति पूजाका विरोधी थिए । तर कालान्तरमा विश्वभर लाखौं उनैका मूर्ति बनाइए । प्रत्येक मानिस बुद्ध हो । मात्र फरक भगवान गौतम बुद्ध उठेका बुद्ध हुन भने हामी सुतेका बुद्ध । हरेक मानिस जागृत हुने हो भने बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ । पुस्तकालयमा राखिएका गीता, कुरान र बाईबल आफै युद्ध गर्दैनन्, जो युद्ध गर्छन तिनीहरुले त्यसको रस लिएकै हुँदैनन् । गाई जुनसुकै रंगको किन नहोस दूध त सेतै हुन्छ नि ।
नेपालका कुनै कम्युनिष्ट नेतालाई अर्को देशको कम्युनिष्ट नेताले पत्याएर एउटा साइकल उपहार दिएको सुनिएको छैन तर तिनैले विरोध गर्ने राजा त्रिभुवनले हिटलरबाट पाएको गाडीको अवशेष अझै संग्रहालयमा सुरक्षित छ । आखिर भगवान विश्वासिला भए त कम्युनिष्टले राजालाई पनि त पुज्दो रहेछ नि ।